Martech dị ugbu a na Google Currents | Martech Zone
Martech dị ugbu a na Google Currents
Ọ bụrụ n’inweta Smartphone ma ọ bụ Mbadamba ụrọ, ịlele weebụsaịtị nwere ike ịbụ obere nsogbu. Google bia na nnaputa ya Google Igha.
Google Currents bụ Google Reader na steroid, na-ekwe ka ndị nkwusa bulie ọdịnaya ha ma hazie ya site na iji Google Currents Producer ha.
Jide n'aka na ịdenye aha na Martech na Google Currents. Anyị enwetala ngalaba anyị niile, ihe ngosi redio anyị, vidiyo na ọbụlagodi nke anyị Ihe Google+!
Tags: okwukwogoogle okwukwogoogle +ipadiphonembadamba
Subdomains, SEO na Azụmaahịa
WordPress 3.3 Na-abịa